Deg Deg:puntland iyo Jubaland oo sadex Qodob ku xidhay ka Qeybgalka shirka Muqdisho – KHAATUMO NEWS
Deg Deg:puntland iyo Jubaland oo sadex Qodob ku xidhay ka Qeybgalka shirka Muqdisho
DEG DEG: Xog cusub oo aan ka helnay Wafdiga PL ee jooga Muqdisho, ayaa cadeynaysa in madaxda Jubbaland iyo Puntland ay khadka telfoonka ku wada Hadleen, ayna isla qaateen go’aan cusub oo ku saabsan in ay Sharuudo kuxiraan ka qeybgalka kulanka Muqdisho ee lagu baaqay.
Waxaana kamid ah.
1- In ay doonayaan in kulanka lagu qabto Xerada Xalane .
2- In aysan Kalsooni ku qabin tagida Madaxtooyada Soomaaliya (Villa Somalia). Cabsi ammaankooda ah, waxayna katimi dhanka Axmed Madoobe.
3- In damaanad-qaade 3aad lahelo, gaar ahaana saxiixa lagu daro Wakiilada caalamiga ah.
Sharuudaha cusub ayaa ka dhigan caqabad hor leh oo ka imaanaysa JL iyo PL oo horey usoo jeediyey in Muqdisho lagu qabto shirka.
Previous Post: Deg Deg:Puntland Oo Ka Hadashay Dagaalkii ka Dhacay Muqdisho
Next Post: DEG DEG: Deni & Axmed Madoobe oo amar deg deg ah siiyey xubno u joogay Muqdisho.
hawiye iyo darood dawlad dhisan kari waa isaaq oo ka maqan allow daroodki aya hada isagii is cunaya beesha hawiyana way la yaabanthy ceebta daroodka haysata iyaga oo farmaajo xoog uga soo tuuraya villa somalia beesha isaaqna caqliga hawiye iyo darood hore ayey uga tashadeen oo ay dawlada barakaysan ka dhisteen
waa arin u fcn jamhuriyada somaliland
1. Muddo Kordhin
A. Barlamaanka Somalia 5 sano ha isu kordhiyaan muddada ay fadhiyayaan.
B. Kadib barlamaanka Somalia madaxweyne Farmaajo iyo xukuumadiisa 5 sano ha uu kkordhiyaan waqtiga.
2. Soo-Qabasho iyo Maxkamadayn
A. Ciidanka Gorgor iyo ciidamada kale ha loo diro soo qabashada qaainul-wadanka(traitors) sheeganaya midowga musharixiinta iyo madax maamul-goboleedyo ountland/jubbaland.
B. Dil toogasho marka lagu xukumay, ha la toogto midowga mudhsharaxiinta, Deni,Madoobe, iyo dhamaan jajuusiinta Kibya, Imaraad, iwm.
Ninka ilaa maanta moodaya in ay Soomaaliya ka jirto dawladi oo ay ka baxday ku-meel gaadhkii baa si cad u waalan. Madaxda iyo shacabka jamhuuriyadda Somaliland sida caalamka kale ayay uula yaabban yihiin madaxda sheegata Fadaraalka iyo kuwa gobalada ee wada wjaqsan. Waa waxa toodii maarayn kari la’a ee hadana wali afkooda uraya ku sheegta jamahuuriyadda Somaliland ee uu caalamkii sida reer Yuru iyo Afrika sida South Africa, Kenya, Guinea iyo qaar kaleba qireen in Somaliland tahay dal mudan aqoonsi dabeetana bilaabay in dunida kale fahamsiiyaan taariikhda ka da’ada wayn Soomaaliya ee ay leedahay jamhuuriyadda Somaliland ee ay ku 1960 ku noqotay dal xoor ah oo madx banaan, sida uu badanaa qoraalo ku baxa luqado badan oo kala duwan uu dunida uugu soo soo gudbiyo adeero Boqor Xasan Maal.
Mohamed Abdo Xalane waxaa yaalaa addunkii baa joogaa yaa aminya Farmajo ninka xabada ala dhacayaa madaxweynayshii ka horeyey oo wlaiba joogaa deegaankii aay qabiilkooda ku badnaayeyn ahmed madoobe waa inu is illaliyaa Frarmajo waa qof walan wax walaab waa ka suuroobayaan inu is dilaan ka baqayaa xataa
Waa galgalasho cusub si doorasho uu dhicin
Xalane maxaa yaala
Ajnabi hana dhexgalo anagoo Somali wada ah
Waa Nasiibdaro (Masuuliyeen oo gobolo madax u ah).